Ban Kim Moon oo booqday aafada daadadka Punjab ee Pakistan - BBC Somali
Ban Kim Moon oo booqday aafada daadadka Punjab ee Pakistan
16 Agoosto 2010
Xoghayah Guud ee Qaramada Midoobey, Ban Ki Moon, iyo madaxweynaha Pakistan, Azif Ali Zardari, waxay soo kormeereen 4 degmo oo ka tirsan gobolka Punjab, oo ka mid ah gobollada cunnada ugu badan laga soo saari jirey dalkaasi.
Image caption Ban Kim Moon oo booqaday dadka ku tabaaloobay daadadka Pakistan
Dhibaatadu way ka baaxad weyn tahay xataa kuwii Tsunnami iyo xaaladihii Haiti ee aan hore u soo arkay
Gobolladaasi Punjab haatan waxay ka mid yihiin degaannada ay daadaddku sida weyn u aafeeyeen, waxana baaba'ay dhammaan dalaggii beeraha ee ay ugu badnaayeen qasabka sonkorta iyo qamadiga. Waxa kale oo ka qaxay degaanadaasi malaayiin beeraley ahaa.
Image caption Dadkii ku tabaaloobay daadadka
Ban Ki Moon waxa uu sheegay inuu soo arkay xaalado aad looga naxo, oo xataa ka daran masiiboyinkii hore ee Tsunnami iyo dhibaatadii Haiti. Waxanu intaasi ku daray in haatan loo baahan yahay in la dedejiyo wixii gargaar iyo taakulayn ah ee la heli karo.
Waxa kale oo Qaramada Midoobay ay sheegtay in aan xataa kala-badh dadkaasi tabaaloobay aan weli la gaadhsiin taakulayn.
Ban Ki Moon waxa uu isna ugu baaqay dalalka deeqaha bixiya in lagu yaabooho gargaar dheeraad ah iyo mucaawino badan oo si weyn loogu baahan yahay xilligan.
Madaxweynaha Pakistan, Asif Ali Zardari, ayaa isna sheegay inay dhabarka u ridan doonaan, inta tamartooda ah, dib-u- dhiska burburka ka yimid daadadkani.
lMeelaha labadan mas'uul ay booqdeen waxa ka mid ah xerooyin qaxooti oo ciidamada Pakistan ku ururiyeen kumanaan qoys oo ka mid ah dadkii daadadku soo barakiciyeen.
Ilaa 20 milyan ayaa haatan lagu qiyaasay guud ahaan dadka ku waxyeelloobay daadadkaas, oo muddo 3 toddobaad ah socdey.
Waxa kale oo heydaha gargaarka ee UN ay sheegeen in la arkay calaamadihii u horreeyey cudurka daacuunka iyo shubanka, kuwaasi oo ka mid ah cudurrada ka yimaad nadaafad-xumada iy faya-qab la'aanta degaanka iyo biyaha.